> Resource> iPod> Olee naghachi Photos si iPod Touch
Olileanya ọ bụla na-agbake foto site na iPod aka 4?
M ehichapụ foto site na m iPod aka, na m hụrụ a otutu saịtị, ha kwuru na ha nwere ike naghachi ha, m na-eche ma m nwere ike n'ezie ga-esi ha azụ. Enyemaka ọ bụla ga-ekele, ekele.
N'ezie, e nwere n'ezie a ụzọ naghachi gị ehichapụ iPod aka photos. Ọ bụrụ na ndị website na-enye gị a free ikpe mbipute nke usoro ihe omume, ị nwere ike ibudata na-enwe a-agbalị. Ị adịghị mkpa iji kwụọ ụgwọ maka ya ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ịhụ gị furu efu iPod aka photos, mgbe nile.
Olee otú naghachi foto site na iPod aka
Nke mbụ niile, na-a ngwá ọrụ nke pụrụ inye aka weghachite oyiyi si gị iPod aka. A bụ m nkwanye: Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Windows). Nke a software-enyere gị aka naghachi furu efu foto site iPod aka site adịrị faịlụ site na gị iTunes ndabere. Ya mere, dị ka ogologo oge ị na synced ngwaọrụ gị na iTunes, ị nwere ike weghachite gị foto site adịrị ndị iTunes ndabere.
Download ikpe mbipute n'okpuru nwere free agbalị.
Nzọụkwụ 1. Wepụ gị iTunes ndabere maka iPod aka
Malite usoro ihe omume ma họrọ mgbake mode: Naghachi si iTunes ndabere File. Mgbe niile iTunes ndabere faịlụ ga-egosipụta n'ihi na ị na-akpaghị aka ke akpan window dị ka ndị a. Họrọ iTunes ndabere gị iPod aka wee pịa "Malite iṅomi" ime ka nzọụkwụ ọzọ.
Nzọụkwụ 2. Naghachi foto site na iPod aka ndabere
Mgbe ọdịnaya nke ndabere e amịpụtara, ị na-ekwe Ka ịhụchalụ hụrụ photos otu otu. Ịhụ ndị na-foto na ị chọrọ na kaa ha. I nwere ike ịzọpụta ha niile na gị Mac site na ịpị "Naghachi" button n'elu nke window. Ugbu a, gị furu efu iPod aka photos na-azụ enweghị ihe ọ bụla àgwà ọnwụ.